Ixesha kunye nabahlobo 54
Ngaba i-magnetism yezilwanyana, i-mesmerism, kunye ne-hypnotism ezihlobene, kwaye ukuba kunjalo, zihlobene njani na?
Imagnethi yezilwanyana ngamandla ahambelana nemagnethi ebonakala kwimizimba engaphilanga, njengamatye okulala kunye nemagnethi yentsimbi. Amandla afanayo aphakanyiselwe kumandla aphezulu kwimizimba yezilwanyana. Imagneti yezilwanyana kukusebenza kwamandla kumalungu ezilwanyana ezikwimo ethile yokwakheka, ngokunxulumene nokwemba, ukuze ulwakhiwo lukwazi ukubamba luze lusebenze njengejelo eliqhuba amandla ombane kwamanye amalungu omzimba.
I-Mesmerism ligama elinikezelwe kwisicelo se-magnetism yezilwanyana, emva kokuba i-Mesmer (1733-1815), iphinde yafumana kwaye emva koko yafundisa kwaye yabhala malunga namandla apha abizwa ngokuba yimagnethi yezilwanyana.
I-Mesmer, ngamanye amaxesha, yayisebenzisa imagnethi yezilwanyana ngokwemvelo; ngamanye amaxesha wasebenzisa ingqondo yakhe ngokunxulumene nemagneti. Indlela yakhe ibizwa ngokuba yi-mesmerism. Wayalela umazibuthe njengamanzi anyibilikayo ngokusebenzisa iingcebiso zeminwe yakhe emzimbeni wesigulana, ngaloo ndlela ebangela ukuba ngamanye amaxesha alale, abize emva kwakhe ukuba alale nge-mesmeric, kwaye ahlala esenza isisombululo esilandelayo. Wayedla ngokubeka isigulana, xa isigulana besiphantsi kwempembelelo ye-mesmeric, kumazwe ahlukeneyo, kuwo athi amaMesmer anike amagama ahlukeneyo. Iindlela zakhe kunye nokwahluka kuyakhankanywa ngababhali abaninzi ngaloo mbandela.
I-Hypnotism, njengoko igama libonisa, unobangela wohlobo lokulala. Ukuzikhohlisa kukubangela ukulala ngokwenza into ngengqondo yakhe xa umntu eyicofa okanye eyicima eyimfihlo yakhe. I-Hypnotism ngokubanzi kukusebenza kwengqondo enye phezu kwenye, ngaphandle okanye ngoncedo lwemagneti yesilwanyana, ukuze ukulala komxholo we-hypnotic kubangelwe sisenzo somntu ophetheyo xa ephazamisa ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye nonxibelelwano lomgaqo wokuqonda kunye iziko elisebenza ngalo isazela ngengqondo yesihloko. Ukulala ngokulukuhla, okubangelwa kukuphazanyiswa kunxibelelwano lomgaqo wokuqonda kunye neziko elisebenza kuwo ngesazela, kwahlukile kubuthongo obuqhelekileyo.
Kwindlela yokulala yesiqhelo ulwazi okanye imigaqo-nkqubo yokuqonda isuka kude kwiziko elisebuchotsheni, khon'ukuze indalo ihlaziye umzimba kwaye ibuyise ukulingana phakathi kweeseli. Umgaqo wokuqonda unokuhambahamba kumaziko e-nerve engqondweni, okanye unokubuyela ngaphaya kwamaziko. Xa umgaqo-nkqubo wokuqonda uhlala uhlala ujikeleze kwelinye okanye ngaphezulu amaziko aqhagamshela ngokubona, ukuva, ukuhoya, ukunambitha, ke amaphupha alalayo, kunye namaphupha akhe anokuziqonda kakuhle, nokuba zezokwenyama okanye zangaphakathi zehlabathi ezinxulumene nomzimba. Kubuthongo obungenaphupha imigaqo-siseko ihlala iyazi, kodwa nangona ikhutshwa kwiimvakalelo, umntu akakwazi ukuyitolika into ayaziyo.
Ukuvelisa ukulala okuluqilima kukuphazanyiswa ngumgaqo wokuqonda komnye, ongakwaziyo okanye ongavumiyo ukuphazamisa. Xa umgaqo-siseko wesifundo uqhutywa kude kwiziko labo lokuqonda, eliqhagamshelwe ngexesha lokuvuka, umxholo uwela ekulalaleni okuluhlu, oko kukuthi okanye bubuthongo obungaphelelanga, ngokungaphaya komgama omkhulu okanye omncinci oya kuwo I-hypnotizer iphumelele ekuqhubeni umthetho-siseko wesifundo. Ngexesha lokulala u-hypnotic i-hypnotist inokubangela ukuba isifundo sibone okanye sive okanye sive okanye sive okanye sive nayiphi na imvakalelo enokubakho xa uvuka, okanye unokwenza isifundo ukuba senze okanye sitsho into eyenzelwa kuye umnxibelelanisi. yedwa ngaphandle, nangona kunjalo, ukuba akanakunyanzela isifundo ukuba senze isenzo sokuziphatha okubi esingathandekiyo kwimvakalelo yokuziphatha yesihloko kwimeko yokuphaphama.
Ingqondo yomqhubi ithatha indawo yomgaqo-siseko ophathekayo wento yakhe, kwaye umxholo uya kuphendula kwaye uthobele ingcinga kunye nesalathiso se-hypnotizer, ngokokucaca kunye namandla eengcinga ze-hypnotizer kunye nenqanaba lokudibana naye kunye nengqondo yento efundiswayo.
Impendulo yombuzo malunga nobudlelwane bemagnethi yesilwanyana, i-mesmerism, kunye ne-hypnotism kukuba amandla emagnethi esilwanyana, amandla endalo asebenza emzimbeni ukuya emzimbeni, inento yokwenza nemizimba yabantu; i-mesmerism yindlela yokusebenzisa amandla ezilwanyana; Uvavanyo lweengqondo kukuvela kokusetyenziswa kwamandla kwengqondo enye egqithiselwe kwenye ingqondo. Kuyenzeka ukuba ingqondo ivelise amandla kazibuthe ngokukhokelela ekuhambeni kwemagneti yesilwanyana. I-hypnotist inokuthi ichaze isihloko sokuthotyelwa kwe-hypnotic ngokuqala ukusebenza kunye nemagneti yesilwanyana kwisifundo; kodwa kwindalo yayo yemagnethi kunye namandla oxinzelelo ahlukile komnye.
I-magnetism yezilwanyana ingaqaliswa njani, kwaye ingayinceda njani?
Imagnethi yezilwanyana yendoda inokuhlakulelwa ngokwenza umzimba wakhe ube ngumazibuthe olungileyo kunye neziko apho amandla obomi kwindalo iphela, asebenza njengokutsalwa kwemagineti. Indoda inokwenza umzimba wayo ukuba ube yimagneti elungileyo yobomi bendalo yonke ngokwenza ukuba amalungu asemzimbeni wakhe enze imisebenzi yabo ngokwemvelo nangokuqhelekileyo nangokuthintela ukugqithisa xa usitya, ukusela, ukulala, nangokulawula ubume benyama. Oku kugqithisa kubangela ukwehla kwebhetri yokugcina, ethi ifom engabonakaliyo yomzimba, ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ngumzimba we-astral. Ukungabikho kokugqithisileyo kuvumela ukuba umzimba wefom ube namandla kwaye obangela ukuba ngokuthe ngcembe uhlengahlengiso kunye nokuhlengahlengiswa kweemolekyuli esele zikhankanyiwe ngaphambili. Xa eyakheke ngolu hlobo umzimba uba yindawo yokugcina amandla ombane.
Ezinye zezinto ezinokubekwa kuzo amandla kazibuthe esinyithi kukwakha amandla ombane, ukwenza umzimba womelele kwaye ube sempilweni ukunyanga izifo kwabanye, ukuvelisa amandla obuthi obuthi buthi-nto leyo engenakuphoswa bubuthongo obunamandla. ukucacisa ngokubonakalayo kunye nokucaphukisa, kunye nokuthetha okungokwesiprofetho, kunye nokuvelisa iimpembelelo zemilingo, njengokutshaja ii-talismans kunye ne-amulets ezinamandla emagnethi. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ezisetyenziswayo apho ubutyobo bezilwanyana bunokubekwa khona ukuqhubeka nokuqiniswa kunye nokuqiniswa kwendawo yomzimba engabonakaliyo ukuze iphinde yakhiwe kwaye iphinde yenziwe kwakhona kwaye kunokwenzeka ukuba ingafi.